प्रचण्ड संगको भेट पछि एमालेले किन बाेलायाे आकस्मिक बैठक ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
प्रचण्ड संगको भेट पछि एमालेले किन बाेलायाे आकस्मिक बैठक ?
काठमाडौँ, २ जेठ । नेकपा एमालेले केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक आह्वान गरेको छ ।
पार्टी एकताका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक आह्वान गरिएको प्रचार विभाग सचिव विष्णु रिजालले जानकारी दिए । बैठक भोली विहीबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नेछ ।